Njalo yesibili usuku lwakho luphela ngalokho okuvame ukuthatha isikhathi eside. Ingabe uvame ukushintsha amantombazane, futhi awukwazi ukuhlala isikhathi eside nenye insizwa? Kungani lokhu kwenzeka kuwe futhi kungani kukhona ukuhlekwa kwamantombazane? Ake sibone ndawonye.
Shock kanye nobuhlungu.
Ngokuvamile intombazane ayikwazi ukuyeka, iguqula abantu njalo, ngoba yayisike yahlukunyezwa ngokocansi noma ukuhlukunyezwa okudabukisayo. Noma ubani, izinhlekelele ezinjalo azidluli ngaphandle kokulandelela futhi ushiya umshicileli ukuze uqhubeke ubuhlobo nabafana. Uma ukushaqeka kudlula, umbuzo uvela: "Kungani lokhu kwenzeka kimi?". Ngokuvamile noma ubani uyavuma ukuthi iphutha lilele ngokuphelele nelesigebengu.
Umphakathi, ngeshwa, uthandeka ukubona okuvame kakhulu kulokhu kulesi sisulu kunesisulu, kodwa umgqugquzeli owamcindezela. Ngemuva kokulalela "ukuphawula" kule ndaba, intombazane ingacabangi ukuthi kwenzekani yedwa futhi iqala ukucabanga ukuthi ubudlelwane obuvamile abufanelekile. Ukuziphatha kwakhe okuqhubekayo ukuzwakalisa futhi uzame ukuzikhohlwa. Ngokushintsha njalo abalingani, intombazane ayikwazi ukusabela ekuhlukumezweni ngenxa yokwesaba ukuthi iphinde isinde ubudlova.
Qaphela. Kubalulekile ukulwa, ngisho noma kubonakala sengathi akukho amandla okwenza kanjalo, awukwazi ukuyeka, ngisho noma behlekwa usulu! Okokuqala, kubalulekile ukuhlala egumbini, futhi okubaluleke kakhulu - ekuqaphelweni, iphosta enombhalo oqoshiwe: "Ukuphila akuphelile!". Okwesibili, susa icala lakho. Okwesithathu, kungenjalo uma kufanele uzigcinele, ukuhlekwa kwentombazane kunzima kakhulu ukusinda. Yiqiniso, ungatsheli wonke umuntu ngengozi.
Kodwa emvelweni ngamunye wethu kumele kube nomuntu oseduze kakhulu, othembekile ongamethemba. Ngaphezu kwalokho, kufanele sithole ithuba lokukhuluma nomqondo wezengqondo, ngoba ukuhleka usulu kwamantombazane akudingeki kudlule ngaphandle kokulandelela.
Isiqubulo esiyinhloko esidinga ukuqondiswa ukuthi kukhona abantu abalungile kunabantu ababi. Yiqiniso, ungabeki ngokuthembekile entanyeni yanoma yimuphi umfana endleleni. Kodwa ngasikhathi sinye, ungaqhubeki ukuthi uzimisele ukukunika imizwa yakho, hhayi ukuthi wonke umuntu uzodingeka akuhlekise. Kuyiqiniso, akusizi ngalutho ukutshela lo mfana mayelana nenhlekelele yakhe ngaso leso sikhathi. Ungabelana ngemfihlo yakho nensizwa, kuphela ngemva kokuba nomuzwa wokuthi lo muntu kufanele athembeke njengalokhu uqobo lwakhe.
Izindaba ezinhle ngokuhaha
Kungani inani lamafutha liwela
Yeka owesifazane ophumelelayo, ongokwesimanje ongakwenza
Ukuzibulala: kanjani ukuvimbela ukungenakwenzeka?
Ama-movie ayishumi aphezulu
Futhi ngokuphathelene "nokukhanga" ebuthweni
Ingabe i-intanethi izogcina isikhundla sayo eminyakeni engu-15?
Izikhala ezingavamile - umkhuba omuhle-2016
Ikhekhe le-Curd ngamamandarins
Ama-Grafski amanxiwa, iresiphi ngesithombe
Ukunakekelwa kwezingane ngenyanga yokuqala. Okufanele umntwana akwazi ukukwenza
I-beetroot isaladi noshizi
Ukulahleka okumnandi wobuntombi
Indlela yokwelapha i-bronchitis yokuvimbela imishanguzo ngamakhambi abantu
Ngami, lawa angama-tonalki angu-3 angcono kakhulu esikhanyeni (hhayi ezingaphezu kuka-ruble 650)
Indlela yokutshala izimbali ezweni
Indlela yokucubungula ngokucophelela ama-carbohydrate wokudla kwe-Kremlin
Ama-muffin enqolobane ane-blueberries namafutha e-orange
Ukunganeliseki ngokubonakala komlingani